‘सहकारी संस्थामा राजनीति भन्ने शब्दलाई घुस्न दिनु हुँदैन'
सहकारी व्यक्तित्व | 2021-06-12 Share
कास्की जिल्लाको रुपा गाउँपालिकामा २०२० सालमा जन्मनुभएकी सुमित्रा देवी सुवेदी ढकाल टोखा नगरपालिका-११, खरिबोटमा महिलाहरुले संचालन गरेको चेतनशील महिला बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाको अध्यक्ष हुनुहुन्छ । विगतमा राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय गैर सरकारी संस्थामा महिला उत्थान सम्बन्धी कामको अनुभव संगाल्नुभएकी उहाँ महिलाहरुलाई आर्थिकरुपमा आत्मनिर्भर बनाउने उद्देश्यले सहकारी अभियानमा होमिएको बताउनुहुन्छ । हामीले उहाँको निजी जीवन, भोगाई, सामाजिक दृष्टिकोण आदि बुझ्ने हेतुले गरेको अन्तरङ्ग कुराकानीको सार यहाँ प्रस्तुत गरेका छौं ।
मेरो जन्म कास्की जिल्लाको रुपा गाउँपालिकामा २०२० सालमा भएको हो । मेरा बुबा आमाकी म एक्ली सन्तान हुँ । म सानो छँदा परिवारमा बुवा, आमा र म थियौं । मेरो बाल्यकाल एउटा गाउँले परिवेशमा बित्यो । त्यस बेलाको समयमा गाउँमा त्यति पढेलेखेका मानिसहरु हुँदैनथे । सबै मानिसहरु आ-आफ्नै खेती किसानीमा लागेका हुन्थे तर म एक मात्र सन्तान भएकोले मैले खासै काम काम गर्नु परेन । त्यस बेलामा पनि मेरा बुवा आमाले आफूले नपढे पनि छोरीलाई पढाउनु पर्छ भन्ने मान्यता राख्नु हुन्थ्यो । त्यसैले उहाँहरुले तिमी पढ मात्र भन्ने भएकोले पनि खासै काम गर्नु परेन ।
बाल्यकालमा मेरा धेरै साथीहरु थिएनन् किनभने मेरो घर सानो बजारमा थियो । त्यो बजारमा मेरो उमेरका केटाकेटी थिएनन् । मेरो ठूलो बुवाको छोरा भाई मात्र थियो । उ र म नै संगै खेल्ने पढ्ने गर्दथ्यौं । विद्यालयका साथीहरु भने थिए । मेरा सबै साथीहरु राम्रै थिए ।
मेरो औपचारिक शिक्षा मेरो घर नजिकैको शिवालय निम्नमाध्यामिक विद्यालयबाट सुरु भयो । म विद्यालयमा पढ्दाताकाको दिनचर्या बिहान एकछिन पढ्ने खाना खाने र विद्यालय जाने । विद्यालयबाट घर फर्केपछि खाजा खाने एकछिन खेल्ने बेलुका खाना खाने र पढन सुरु गर्ने । त्यस समयमा विजुली बत्ती थिएन, घडी पनि हुन्थेन त्यसैले हामीलाई सरले गाउँमा बत्ती निभेपछि मात्र सुत्नुपर्छ भन्नुहुन्थ्यो । हो म पनि त्यसरीनै पढ्थें । मेरो दिनचर्या यसरी नै बित्थ्यो । तर पछि माध्यामिक विद्यालय भने घर देखि करिब साढे दुई घण्टा टाढा थियो । रामकोट माध्यामिक बिद्यालय पुग्न बिहान सातै वजे हिँडनु पथ्र्यो । बेलुका घर आइपुग्दा सात बज्थ्यो। त्यहीँबाट मैले एस.एल.सी. पास गरें । मैले पोखराको पृथ्विनारायण क्याम्पसबाट शिक्षा शास्त्र संकायमा गणित विषयमा स्नातक गरेकी छु ।
म एकल महिला हुँ । मेरा एक छोरा र छोरी गरि दुई सन्तान छन् । छोरा बुहारी नाती छन्, तर विदेशमा छन् । छोरीको पनि विवाह भईसकेको छ । हाल म सासु ससुरासंग बस्छु । मेरो विवाह प्रेम विवाह हो तर भागी होइन । जोसंग प्रेम भयो उसैसँग विवाह भयो ।
खानपानमा म खासै सौखिन छैन । मलाई सादा दाल भात, तरकारी नै मन पर्छ । म साहाकारी होइन । तर म मासुमा त्यति धेरै इच्छा पनि गर्दिनँ । मैले कहिल्यै मदिरा सेवान गरेकी छैन । मलाई आधुनिक गीत, लोकगीत मन पर्छ । म प्राय बेलुका सुत्नेबेलामा यस्तै खालका गितहरु बजाएर सुन्दै सुत्छु । म पहिले पनि खासै खेलकुदमा सहभागी भईन तर मलाई फुटबल र क्रिकेट मन पर्छ र समय मिल्दा हेर्नेगर्छु । चलचित्र हेर्नमा मेरो खासै सोख छैन तर मलाई पुराना चलचित्रहरु मन पर्छ कहिले काहीँ यूटुबमा हेर्ने गर्छु ।
फुर्सदको समयमा समाचार हेर्छु । केही राम्रा पुस्तकहरु भएमा पढ्छु । मलाई फूल लगाउन मन पर्छ । करेसा बारीमा समय अनुसारको तरकारी लगाउन मन पर्छ । त्यसैले बिहान बेलुका फुर्सद पाएँ भने त्यतै काम गर्छु । साहित्य सिर्जनामा मेरो त्यति रुचि छैन किनकि मलाई साहित्य सिर्जना गर्न आउँदैन ।
मैले पूर्व देखि पश्चिम सम्मका धेरै ठाउँहरु घुमेकी छु । तर बिदेशको सवालमा विभिन्न तालिमहरुमा भारतमा जाने अवसर मिलेको थियो । अन्य देशहरुमा जाने अवसर मिलेको छैन ।
मेरो राशी बृष हो । म भाग्यमा भन्दा पनि कर्ममा विश्वास गर्दछु । किन कि आफूले कर्म नगरी भाग्यमा भएर मात्र कुनै पनि सफलता प्राप्त गर्न सकिदैन । आज सम्म मैले कहिल्यै पनि चिना हेराएकी छैन । मृत्यु एक ध्रुवसत्य हो । मानिस जन्मेपछि कुनै दिन मर्छ । तर मृत्युलाइ कस्तो बनाउने आफ्नो हातमा हुन्छ । मैले भन्न खोजेको मृत्युलाई कपास जस्तो हल्का बनाउले वा ढुँगा जस्तो गह्रुँगो बनाउने । आज सम्म जीवनमा मैले गर्नै नहुने केही भुल गरेजस्तो लागेको छैन । जीवनमा कुनै न कुनै सपना हुन्छन् नै सपना नै नदेखि जीवन अगाडी बढ्दैन । तर मैले ठूलो महत्वकांक्षी सपना भने देखेकी छैन ।
राजनीति भनेको कुनै पनि देशलाई, समाजलाई वर्गलाई अगाडि बढाउने एउटा साधन हो । यसैको माध्यमबाट हरेक क्षेत्रमा विकास र समृद्धि हुन्छ । मानिसको जीवनस्तर माथि उठ्छ तर यो स्वच्छ हुनु पर्दछ । अहिलेको जस्तो फोहोरी हुनु हुँदैन । हिजो विद्यार्थीकालमा सक्रियरुपमानै राजनीतिमा लागियो । विद्यार्थीजीवन पछि पनि लागेकै हो । तर आज म वर्तमान अवस्थामा सक्रिय राजनीतिमा छैन । तर पनि हामी जस्तो सचेत व्यक्तिको कुनै न कुनै दलमा आस्था त भईहाल्छ ।
आध्यात्ममा म विश्वास गर्दछु किन कि म नास्तिक होइनँ । म आस्तिकनै हुँ तर पनि म त्यसैमा लिन भएर लाग्दिनँ । यसले क्षणिकरुपमा भए पनि मनलाई शान्ति दिन्छ । आध्यात्मले मन अशान्त भएको बेलामा शान्त पार्ने र सकारात्मक बाटोतर्फ डोहोर्याउने काम गर्दछ ।
पहिला विद्यार्थी कालमा पनि म महिलाहरुको कसरी उत्थान गर्न सकिन्छ भनेर लागेँ । पछि मैले धेरै वर्ष राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय गैर सरकारी संस्थामा रहेर महिलाको क्षेत्रमानै काम गरेँ । काम गर्ने सिलसिलामा सुगम देखि दुर्गम सम्मका महिलाहरुलाई संगठित गर्ने आर्थिक रुपमा कसरी सक्षम बनाउने र उनीहरुलाई कसरी आर्थिक क्षेत्रमा सक्रियतापूर्वक प्रवेश गराउने भन्ने नै रह्यो । आर्थिकरुपमा जवसम्म महिलाहरु सक्षम हुँदैनन् तव सम्म महिलाहरु आत्मनिर्भर हुँदैनन् । जव आत्मनिर्भर हुँदैनन तव सम्म विभिन्न खालका विभेदहरु, उत्पीडनहरु सहिनै रहनु पर्दछ भन्ने ठम्याई रह्यो ।
मैले काम गर्दाको अनुभव र मेरो लक्ष्य अनुसार मैले महिलालाई अगाडि बढाउने माध्यम सहकारीलाई नै देखेँ । म काठमाडौं आईसके पछि पहिला दिदी बहिनीहरुलाई समूहकारुपमा आवद्ध गर्ने बचत गर्ने बानीको बिकास गराउने, उनीहरुलाई विभिन्न खालका सिपमूलक तालिमहरु संचालन गर्ने, उनीहरुको व्यक्तित्व विकासका लागि तालिमहरु संचालन गर्ने काम गरियो । र, त्यही क्रममा समूहमा करिब ३५ लाख रुपैयाँ वचत जम्मा भएपछि २०६९ सालको जेष्ठ २६ गते चेतनशील महिला बचत तथा ऋण सहकारी संस्था दर्ता गरियो । त्यस पछि आज सम्म पनि यही सहकारीमा सक्रियरुपमा लागिरहेकी छु । सहकारीमा लाग्छु भन्दा मलाई परिवारबाट सकारात्मक प्रतिक्रिया प्राप्त भयो । मेरो परिवार एउटा राजनीतिक परिवार थियो । बुझ्ने परिवार भएकोले सहयोग नै रह्यो ।
मैलै माथि पनि भनिसकेँ, आजको परिस्थितिमा महिलाहरु पछि पर्नुको मख्य कारण नै आर्थिक पक्ष हो । जव सम्म महिलाहरु आर्थिकरुपमा सबल हँदैनन् तव सम्म उनीहरुले हरेक प्रकारका हिंसाहरु सहिरहनु पर्ने हुन्छ । आर्थिकरुपमा सक्षम हुनका लागि पैसा चाहिन्छ । यसको लागि आफूँसंग नभए पनि सहकारीको माध्यमवाट अगाडि बढ्न सकिने र सहकारी भनेको एउटा दुःख सुख विसाउने साझा थलो भएकोले पनि मैले सहकारीलाई नै रोज्न पुगेकी हुँ । सहकारी क्षेत्रमा लाग्नु भन्दा पहिला मैले करिब ८ वर्ष आर.आर.एन. र सी.एच.डी.पी.मा रहेर काम गरेँ । त्यसपछि विद्यालयमा प्रशासनमा रहेर काम गरेँ । हाल अन्य पेशामा आवद्ध छैनँ ।
तपाईंले यसमा आर्थिक पक्षलाई जोड्न खोज्नुभएको हो भने सहकारीमा लागेर मात्र परिवार संचालन गर्न सकिँदैन । तर सहकारीबाट सहयोग लिएर आजको व्यापारिक बजारको पहिचान गरेर सहीखालको व्यवसाय संचालन गर्न सकेको खण्डमा सजिलैसंग परिवार संचालन गर्न र बचत गर्न पनि सकिन्छ ।
हाल म आवद्ध भएको सहकारी संस्था चेतनशील महिला बचत तथा ऋण सहकारी संस्था हो । यो संस्था स्थापना भएको ९ वर्ष भयो । अहिलेको अवस्थाको मूल्याङ्कन गर्ने हो भने संस्थाले यस अवधिमा निकै फड्को मारेको छ । यस वर्ष हामीले आफ्नै भवन निर्माण गरेर कार्यालय संचालन गरिरहेका छौं । महिलाले मात्र केही गर्न सक्दैनन् भन्ने समाजलाई हामीले चुनौती दिईरहेका छौं । यो नगरपालिकामा हामी एउटा सफल सहकारीको रुपमा स्थापित भएका छौं । हामीसंग अहिले शेयर पूँजी १ करोड ९४ लाख २४ हजार ८ सय ७ रुपैयाँ, जम्मा बचत १२ करोड ८७ लाख ८१ हजार २ सय २९ रुपैयाँ र जम्मा कर्जा लगानी ९ करोड ४ लाख रुपैयाँ रहेको छ । कोभिड-१९ महामारीको असर हाम्रो संस्थामा पनि पर्ने नै भयो । त्यसकारणले गर्दा गत वर्ष भन्दा यस वर्ष लगानीमा केही कमी देखिएको छ । तर पनि संस्थाको समग्र अवस्थाको मूल्याङ्कन गर्दा राम्रो छ । हाम्रो संस्था नै महिला सहकारी भएको हुनाले सबै सदस्यहरु महिला नै हुनुहुन्छ । हाल हामी ४ सय २५ सदस्यहरु छौं ।
हामीले संस्थालाई स्थायित्व दिनका लागि सदस्यहरुलाई सुसूचित गराउनका लागि सहकारी शिक्षामा जोड दिने, सुरक्षित लगानीका लागि सम्भावित क्षेत्रको पहिचान गर्ने, महिलाहरुलाई आर्थिक क्षेत्रमा सक्रिय बनाउनका लागि क्षेत्र पहिचान र आवश्यक तालिम तथा परामर्शमा जोड दिने, हाम्रो संस्थाले करिव ८० प्रतिशत धितो बेसमा लगानी गरिरहेकोमा आगामी दिनमा त्यसलाई अझ बढाउनमा जोड दिने योजना बनाएका छौं । हाम्रा शेयर सदस्यहरुको व्यक्तित्व विकासगर्नका लागि समय समयमा विभिन्न खालका तालिमहरु संचालन गर्दै आएकोमा यसलाई अझै बढाउँदै लैजाने । यस्तै यस्तै योजनाहरु छन् ।
जुनसुकै काम गर्दा पनि कठिनाई त हुन्छ नै । झनै सहकारी संस्था संचालन गरेर काम गर्दै जाँदा निकै व्यवधानहरु आउँछन । किनभने धनको मुख कालो हुन्छ भन्ने त उखानै छ । यो त पैसाको नै कारोबार गर्ने ठाउँ हो । सबै सदस्यको स्तर एउटै हुँदैन, सबैले संस्थाका अप्ठ्यरालाई बुझेका हुन्छन भन्ने हुँदैन । त्यसलाई मिलाएर लैजान निकै कठिन हुँदोरहेछ । तर हार नमानीकन अगाडि बढीरहन पर्ने रहेछ । अर्को महत्वपूर्ण कुरा भनेको समय समयमा विभागबाट परिवर्तन गरिएका नीति नियमहरु । विभागले सबै सहकारीलाई एउटै टोकरीमा राखेर व्यवहार गर्दा हामी जस्ता इमान्दार संस्थालाई निकै अप्ठ्यरो पर्ने रहेछ । सरकारको तर्फबाट कुनै पनि सहयोग नहुनु, खाली दायित्वका कुरा मात्र गर्नु र संस्थालाई समस्या परेको वेलामा सहयोग नगरी बेवास्ता गर्नाले पनि संचालनमा धेरै अप्ठ्याराहरु हुदारहेछन ।
सहकारी संस्थालाई राम्रोसंग अगाडि बढाउनका लागि पहिला त आफू स्वार्थरहित हुन जरुरी छ । आफैं आर्थिक प्रलोभनमा परियो भने संस्था डुब्न सुरु हुन्छ । संस्थामा राजनीति भन्ने शब्दनै घुस्न दिनु हुँदैन । सहकारी सबै वर्ग, जात जाती, धर्म, भाषा र राजनीतिक क्षेत्रका व्यक्तिहरुको साझा थलो हो । त्यसलाई मिलाएर लान सक्नु पर्दछ । संस्था अगाडि बढाउनका लागि सबै भन्दा महत्वपूणर् अर्को कुरा हो ‘टिम स्पिरिट’ सामूहिक एकता, यो भएन भने संस्था धेरै समय टिकाउँन सकिँदैन् । त्यसैले संस्थामा म नभै हामी भनेर लाग्नु पर्दछ ।
बागलुङको रेशमा वडा कार्यालय र सहकारीको सहकार्यमा वाक कला तथा वित्तीय साक्षरता तालिम
बजरंगबली साकोसको आयोजनामा निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर
चेतनशील महिला साकोसको दशौँ वार्षिक साधारण सभा सम्पन्न
पञ्चकन्या साकोसको २३औं वार्षिक साधारण सभा, निक्षेप संकलन ८१ प्रतिशतले वृद्धि
जेष्ट साकोसको कुल कारोबार साढे दुई अर्ब नाघ्यो
शुभप्रवा सेभिङ्गको १२ औं वार्षिक साधारण सभा सम्पन्न, शेयर पुँजी १८ प्रतिशतले वृद्धि